ဦး နှောက်ထဲမှာအားကောင်းတဲ့ Nootropic Coluracetam အသစ်၏ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
Coluracetam BCI-540 or 2- (2-oxopyrrolidin-1-yl) -N- (2, 3-dimethyl-5, 6, 7, 8-tetrahydrofuro2, 3-b quinolin-4-yl) acetoamide လို့လည်းလူသိများ MKC-231 အဖြစ်လူသိများသည်။ Coluracetam သည် racetam မိသားစုမှဖန်တီးထားသော nootropic အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မှတ်ဥာဏ်နှင့်အထွေထွေသိမြင်မှုလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကိုတိုးမြှင့်ရာတွင်ခိုင်မာသော nootropic ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
Coluracetam သည်အခြေခံအားဖြင့်အစားအသောက်ဖြစ်သည် နောကျဆကျတှဲ piracetam ထံမှရရှိသော။ Coluracetam ကို Mitsubishi Tanabe Pharma ကော်ပိုရေးရှင်းက ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးတီထွင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအတွက်ကုသမှုတစ်ခုအဖြစ်၎င်းကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ကန ဦး ရလဒ်များသည်အချို့သောအလားအလာများကိုပြသနိုင်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အဆုံးမှတ်သို့မရောက်ရှိခဲ့ပါ။
နောက်ပိုင်းတွင်လိုင်စင်ကို BrainCells Inc. သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး၎င်းသည်အဓိကစိတ်ကျရောဂါရောဂါ (MDD) နှင့်အထွေထွေစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါ (GAD) တို့ကိုကုသရန်တီထွင်ခဲ့သည်။ သူတို့ကအဆင့် ၂ ကလက်တွေ့လေ့လာမှုကိုရောက်ပြီးလူနာတွေကိုစိတ်ကျရောဂါအကြီးအကျယ်စိတ်ရောဂါမှသက်သာရာရစေရန်အချို့သောအလားအလာများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
ကံမကောင်းစွာဖြင့် Brain Cells Inc. သည်၎င်းကိုအပြည့်အဝမဖွံ့ဖြိုးနိုင်ခြင်းနှင့်လည်းကုမ္ပဏီသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်လည်းပိတ်သိမ်းခြင်းခံခဲ့ရသည်။ Coluracetam သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ လိုင်စင်ချထားပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ဤအရာများရှိသော်လည်း coluracetam ကိုအလွန်အစွမ်းထက်သည် nootropic ဝင်း။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်အမြန်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးမိနစ် ၃၀ အတွင်းသွေးထဲတွင်အလွန်မြင့်မားသောပမာဏသို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။ သို့သော်သုံးစွဲမှုသည်သုံးနာရီအတွင်းအဆင့်များသည်ကျဆင်းသွားပြီးဆိုလိုသည်မှာသုံးနာရီအတွင်းအမြတ်အများဆုံးရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အခြား racetams များကဲ့သို့ပင် coluracetam သည် acetylcholine ပမာဏကိုတိုးပွားစေသော်လည်း၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုယန္တရားသည်ထင်ရှားသည်။ Coluracetam သည်အဓိကအားဖြင့်မြင့်မားသော affinin choline လွှာမှ (HACU) ဖြစ်စဉ်ကိုပိုကောင်းစေပြီး choline ကို acetylcholine သို့ပြောင်းလဲပေးသည်။ အဆိုပါ neurotransmitter, acetylcholine, ဤအရပ်မှတစ် nootropic ဒြပ်ပေါင်းအဖြစ် coluracetam စွမ်းရည်, သိမြင်မှု function ကိုနှင့်မှတ်ဉာဏ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
coluracetam နှင့်ဆက်နွယ်သောအခြားအကျိုးကျေးဇူးများမှာအမြင်အာရုံတိုးတက်ခြင်း၊ နားလည်မှုပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်းနှင့်လွတ်လပ်စွာပြန်လည်မှတ်မိနိုင်ခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ခြင်း၊ စိတ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းမှသက်သာရာရစေရန်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ခြင်းအတွက်ပါဝင်သည်။
Coluracetam ကို F tablet များ၊ ၎င်းကိုနှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ Coluracetam သည်အဆီပျော်ဝင်နိုင်သည့် nootropic ဖြစ်ပြီးလျင်မြန်စွာစုပ်ယူနိုင်ရန်အတွက်အပျိုစားသံလွင်ဆီကဲ့သို့ကျန်းမာသောဆီ / အဆီတစ်လျှောက်တွင်အသုံးပြုသင့်သည်။
ဤသည် nootropic သည်အုပ်ချုပ်မှုပြီးနောက်မိနစ် ၃၀ အတွင်းပလာစမာတွင်မြင့်မားသောအဆင့်သို့ရောက်ရှိသွားသဖြင့်အလွန်တိုတောင်းသောအချိန်တွင်အလုပ်လုပ်သည်။
Coluracetam သည်ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်အဆီပျော်ဝင်နိုင်သည့် nootropic ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Coluracetam ဟုလည်းလူသိများသည် BCI-540 ယခင်က MKC-231 အဖြစ်ရည်ညွှန်းခဲ့သည်။
၎င်းသည်ဒြပ်ပေါင်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်း coluracetam nootropic အကျိုးကျေးဇူးများကိုကတိပြုသည်။ မှတ်ဥာဏ်တိုးတက်ခြင်း၊ သင်ယူခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းများကိုသက်သာစေခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျစေသည့်ရောဂါနှင့်အမြင်အာရုံတိုးတက်ခြင်းတို့တွင်များစွာအကျိုးကျေးဇူးများရှိသည်ဟုယုံကြည်ရသည်။
လုပ်ဆောင်ချက်၏ Coluracetam ယန္တရား
coluracetam သည် ဦး နှောက်ထဲတွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သနည်း။
အခြား racetams များနည်းတူ coluracetam သည် choline နှင့် suscylcholine တို့ကိုမတူညီသောနည်းလမ်းများဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်ခြင်းဖြင့် ဦး နှောက်ကိုအကျိုးပြုသည်။ ယခုအထိပြုလုပ်ခဲ့သည့်သုတေသနပြုချက်အရ ဦး နှောက်အတွင်းရှိ coluracetam အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်အဓိကယန္တရားသုံးခုဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကား coluracetam လုပ်ဆောင်ချက်ယန္တရားများကိုအောက်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားကြသည်;
(1) High- ဆှဖှေဲ့ကိုလိုနီစားသုံးမှုကိုထောက်ပံ့
Nootropics အဆိုပါ racetam လူတန်းစားအတွက်တာဝန်ရှိ receptors လှုံ့ဆျောခြင်းဖြင့် acetylcholine ၏ထုတ်လုပ်မှုသွေးဆောင်ဖို့လူသိများကြသည်။ သို့သော် လုပ်ဆောင်ချက်၏ coluracetam ယန္တရား ထူးခြားသည်မှာ၎င်းသည်မြင့်မားသောဆှဖှေဲ့ choline ဓာတ်ငွေ့ (HACU) ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် acetylcholine ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။
HACU စနစ်သည် choline ကို ဦး နှောက်သို့သယ်ယူပို့ဆောင်သောအလယ်ဗဟိုစနစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် acetylcholine ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်တွင်အခြေခံအားဖြင့်နှုန်းကိုကန့်သတ်သောအဆင့်ဖြစ်သည်။ Acetylcholine သည်မှတ်ဥာဏ်၊ သင်ယူခြင်းနှင့်အထွေထွေသိမြင်မှုလည်ပတ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည့် neurotransmitter ဖြစ်သည်။
Coluracetam ဖြည့်စွက် acetylcholine ပိုမိုထုတ်လုပ်မှုမှရလဒ်များသည် ဦး နှောက်ထဲသို့ choline ကိုသယ်ဆောင်သည့်နှုန်းကိုတိုးစေသည်။ ၎င်းသည် CHT1 ကိုပိုမိုမြင့်မားစေသည့် high-affinein choline transporter ဖြစ်သောကြောင့်စားသုံးရန်အတွက်အလွန်မြင့်မားသောရရှိနိုင်မှုကိုရရှိစေသည်။
HACU ပြတ်တောက်မှုဖြစ်လျှင် ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်မှတ်ဥာဏ်နှင့်သင်ယူခြင်းတို့တွင်ပြissuesနာများရှိသည်ဟုခံစားရသည်။ Coluracetam သည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောအချို့သောအာရုံကြောဆဲလ်များပျက်စီးသွားသည့်တိုင်အောင် HACU စနစ်ကိုပိုမိုထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည့်သွေးရည်ကြည်အတွင်းရှိကိုလက်စ်ပမာဏကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။
အာရုံကြောများတွင် acetylcholine ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်လာခြင်းသည်ရေတိုနှင့်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်၊ သင်ယူခြင်းနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။
(2) AMPA စွမ်းရည်တိုးတက်အောင်
သုတေသနတွေ့ရှိချက်အရ coluracetam သည် alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole propionic acid (AMPA) ၏စွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ AMPA receptors များသည် glutamate ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုခံရပြီး၎င်းသည်သင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဥာဏ်အတွက်အခြေခံဖြစ်သောရေရှည်စွမ်းဆောင်ရည် (LTP) ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
လတ်တလောတွင် Serotonin Selective Reuptake Inhibitors (SSRIs) များသည်စိတ်ဝေဒနာများနှင့်စိတ်ကျရောဂါတို့ကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသောဆေးများဖြစ်သည်။ ဤ SSRI များသည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိသူ serotonin level ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများစွာဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Coluracetam သည် glutamate ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်စိတ်ကျရောဂါဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအတွက်ကုသမှုသည် serotonin နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဆိုးကျိုးများကိုမဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါ။
(3) glutamate အဆိပ်ဖြစ်စေမှု၏အန္တရာယ်မှ NMDA receptors အားကာကွယ်ခြင်း
နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော coluracetam ယန္တရားသည် N-Methyl-D-aspartate (NMDA) receptors များကိုအချိုမှုအဆိပ်မှကာကွယ်ရန်စွမ်းရည်ဖြစ်သည်။ NMDA အဲဒီ receptor ဟာ glutamate receptor ဖြစ်ပြီးအာရုံကြောဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ ion channel protein ပရိုတိန်းလည်းဖြစ်တယ်။ NMDA receptor သည် synaptic plasticity နှင့် memory activities အားထိန်းချုပ်ရာတွင်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။
ဦး နှောက်အကျိတ်များ၊ စိတ်ဒဏ်ရာ ဦး နှောက်ဒဏ်ရာ၊ အခြား ဦး နှောက်ရောဂါများအကြားအယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါစသောအဓိက ဦး နှောက်ရောဂါများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
Coluracetam သုတေသနသည်၎င်းကိုအစွမ်းထက်သောအရာအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုသည် nootropic ၎င်း၏အသုံးပြုသူများအားဖြင့်အပြုသဘော coluracetam အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူဒွန်တွဲ။ Coluracetam သည်ထူးခြားသောလုပ်ဆောင်မှုယန္တရားကြောင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောသိမှုတိုးပွားစေသောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဒြပ်ပေါင်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် coluracetam ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုထိုးထွင်းသိမြင်ရန်အတွက်လူသားများတွင်ပိုမိုလေ့လာမှုများပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
အောက်ကများမှာ coluracetam အကျိုးခံစားခွင့် တ ဦး တည်း coluracetam ၏တသမတ်တည်းနှင့်သင့်လျော်သောအသုံးပြုမှုကနေတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ကြောင်း,
Coluracetam သည် neurotransmitter ထုတ်လုပ်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီးသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဥာဏ်နှင့်ဆက်စပ်သော acetylcholine ။
လေ့လာမှုများစွာအရ coluracetam သည်ကြွက်များတွင်မှတ်ဥာဏ်နှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ သို့သျောလညျး, လေ့လာမှုများသေးလူ့ဘာသာရပ်များနှင့်အတူကောက်ယူကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်ရလဒ်အလားတူဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဥပမာအားဖြင့် - မှတ်ဥာဏ်ချို့တဲ့မှုနှင့်အတူကြွက်များကိုလေ့လာရာ၌ ၁-၁၀ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ရှိ coluracetam ကိုပါးစပ်ဖြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမဖြစ်စေဘဲမှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးတက်စေသည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Coluracetam ဖြည့်စွက် တိုတောင်းသောမှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။ ဤဂုဏ်သတ္တိများသည်ကျောင်းသားများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိသောပတ်ဝန်းကျင်ရှိမည်သူမဆိုသူတို့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုသည်။
အများအပြားက coluracetam အတွေ့အကြုံများ တစ် ဦး ချင်းသုံးစွဲသူများက coluracetam သည်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်စွမ်းရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာနားလည်နိုင်သောဖတ်ရှုခြင်းနှင့်လေ့လာထားသည့်ပစ္စည်းများပြန်လည်သိမ်းယူခြင်းအားဖြင့်ပြသသည်။
Coluracetam သည် choline စားသုံးမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအပေါ်လွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဟုဖော်ပြပြီး coluracetam ပမာဏနည်းပါးစွာပင်သောက်သုံးပြီးနောက်ကြာမြင့်စွာကပင်သိမြင်မှုအားပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
သုတေသနပြုချက်အရ coluracetam ဖြည့်စွက်ဆေးသည်စိတ်ကျဆေးများကိုခုခံနိုင်စွမ်းမရှိသူများအတွက်အလားအလာရှိသောကုသမှုဖြစ်သည်။
BrainCells Inc. မှပြုလုပ်သောအဆင့် ၂ ကစမ်းသပ်မှုအား coluracetam ၏အဓိကစိတ်ကျရောဂါ (MDD) နှင့်အထွေထွေစိုးရိမ်ဖွယ်ရာရောဂါ (GAD) တို့၏ထိရောက်မှုကိုစမ်းသပ်ရန်စိတ်ကျရောဂါဆန့်ကျင်သူများကိုခံနိုင်ရည်ရှိမှုအတွက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပဏာမရလဒ်များအရ coluracetam သည်တစ်နေ့လျှင် ၂၄၀ မီလီဂရမ်နှင့် MDD နှင့် GAD တို့ကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်။
(5) ဖြစ်နိုင်ခြေ Neurogenesis မြှင့်တင်ရေး
Neurogenesis သည်အခြေခံအားဖြင့် ဦး နှောက်ဆဲလ်အသစ်များဖန်တီးသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်သည်သိမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုနှင့်အထွေထွေ ဦး နှောက်ကျန်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးသည်။
Coluracetam သည် neurogenesis ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ သို့သော်နောက်ခံလုပ်ဆောင်ချက်သည်မရှင်းလင်းပေ။ သုတေသနက coluracetam သည် acetylcholine ပမာဏနှင့်အထူးသဖြင့် hippocampus ကိုတိုးမြှင့်နိုင်စွမ်းနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
Coluracetam သည် acetylcholine ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးပြီး၎င်းသည် Schizophrenia ခံစားနေရသောလူများအား acetylcholine ပေါင်းစပ်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သောအင်ဇိုင်းများသည်များသောအားဖြင့်အားနည်းနေသည်ကိုကူညီနိုင်သည်။
၎င်းသည် Alzheimer ရောဂါကဲ့သို့သောအခြားသတ္တုမသန်စွမ်းမှုများမှလူများဖျားနာခြင်းအတွက်လေ့လာမှုကိုလည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်။
Coluracetam စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည် nootropic ပိုသောအရောင်အမြင်အာရုံ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောပုံသဏ္recognitionာန်အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့်အမြင်အာရုံတိုးတက်ခြင်းတို့ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောဒြပ်ပေါင်းသည်သင်၏သိမြင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရုံသာမကသင်၏အမြင်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည် retina ၏ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာသောရောဂါကြောင့်လူများ၏အာရုံကြောများကြီးထွားမှုကိုအားပေးနိုင်သည်။
coluracetam ကိုအသုံးပြုသူများကွဲပြားခြားနားသည် coluracetam သက်ရောက်မှု ပိုမိုတောက်ပသောအရောင်များ၊ ပြင်းထန်သောဆန့်ကျင်ဘက်၊ ပုံသဏ္andာန်နှင့်အလင်းများအပေါ်ထက်သောအာရုံစူးစိုက်မှုတို့ကပိုမိုတောက်ပလာသည်။
Irritable bowel syndrome (IBS) သည်အူသိမ်အူမကြီးရောဂါဖြစ်ပြီး၊
2018 လေ့လာမှုတစ်ခုအရ coluracetam သည်အူသိမ်အူမရောဂါလက္ခဏာများကိုသက်သာစေခြင်းဖြင့် CHT 1 မော်လီကျူးကိုထိန်းညှိနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
(9) Coluracetam အပန်းဖြေအသုံးပြုမှု
Coluracetam သည်ကောင်းသောစိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ပေးသောသူဖြစ်ပြီးတဖြည်းဖြည်းသက်သောင့်သက်သာရှိသောခံစားမှုကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်မှုအတွက်ကောင်းမွန်သောကြီးထွားမှုဟော်မုန်းများကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေသည်ဟုယူဆထားသည်။ သို့သော်၎င်းကိုစွမ်းအင်အာနိသင်တိုးမြှင့်သည့်အရာအဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်အကောင်းဆုံးရလဒ်များအတွက်လှုံ့ဆော်သူနှင့်အသုံးပြုသင့်သည်။
Coluracetam Vs aniracetam, fasoracetam, pramiracetam နှင့် Piracetam ။ ခြားနားချက်ကဘာလဲ
(၁) ။ Coluracetam vs Aniracetam
coluracetam နှင့် aniracetam နှစ်မျိုးလုံးသည် racetam မိသားစုတွင်ဖြစ်သည်။ သူတို့နှစ် ဦး စလုံးအားကောင်းတဲ့ nootropic ဖြည့်စွက်ဖြစ်ကြသည်။ Aniracetam ကို ၁၉၇၀ နှစ်များအစောပိုင်းတွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ Aniracetam သည်မှတ်ဥာဏ်နှင့်စိတ်ဓာတ်ကိုမြှင့်တင်ရန်၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းလက္ခဏာများကိုလျှော့ချရန်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်ဟုလူသိများသည်။
နှစ်ဦးစလုံးနေစဉ် coluracetam နှင့် aniracetam သင်၏ ဦး နှောက်အတွင်းရှိ acetylcholine ပမာဏကိုအကျိုးသက်ရောက်သည်၊ ၎င်းတို့သည်၎င်းတို့အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်ပုံနှင့်ကွဲပြားသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်၏အဓိက coluracetam ယန္တရားသည်မြင့်မားသောတွယ်တာမှုကိုလိုအားကိုစုပ်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကိုစည်းမျဉ်းများမှတဆင့် Aniracetam သည် acetylcholine ပိုမိုထုတ်လွှတ်မှုကိုတိုက်ရိုက် ဦး ဆောင်သည်။
ထို့အပြင် coluracetam ပြင်းထန်သောဆန့်ကျင်ဘက် ဦး ဆောင်လမ်းပြရန်တွေ့မြင်နှင့် Aniracetam ပိုပြီးအရောင်ရွှဲစေပါတယ်စဉ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပိုကောင်းစေပါတယ်။
aniracetam နှင့်ပေမယ့် coluracetam nootropics စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်သူများဖြစ်သည့် Coluracetam သည် aniracetam ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစိတ်ဓာတ်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်အရာဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်အချို့ aniracetam အသုံးပြုသူများသည်တီထွင်ဖန်တီးမှုတိုးတက်ကြောင်းအစီရင်ခံသည်။ Coluracetam သည်အခြားတစ်ဖက်တွင်အမြင်အာရုံကိုကောင်းမွန်စေသည်။
(၂) ။ Coluracetam vs Fasoracetam
Fasoracetam သည် racetam မိသားစုတွင်နောက်ဆုံးပေါ် nootropic ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကလေးငယ်များအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောကုသမှုသို့မဟုတ်အာရုံစူးစိုက်မှုဆိုင်ရာချို့တဲ့မှုလွန်ကဲခြင်း (ADHD) အနေဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်သည်။
coluracetam ကဲ့သို့ပင် Fasoracetam သည် ဦး နှောက်၏ကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သောမှတ်ဥာဏ်နှင့်အထွေထွေသိမှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေသည့်အလားအလာရှိသည်။ သူတို့ကနှစ် ဦး စလုံး acetylcholine ၏ပေါင်းစပ်အတွက်အသုံးပြုသောသောကိုလိုနီလွှာမှတိုးမြှင့်။
လုပ်ဆောင်ချက်၏ထူးချွန် fasoracetam ယန္တရားတစ်ခုမှာ GABAb receptors upregulate ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ဖြစ်ပါတယ်။ GABA receptors များသည်စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ကျမှုကိုသက်သာစေသည့်အပြင်အိပ်စက်ခြင်းကိုလည်းအထောက်အကူပြုသည့်သင်ယူခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သည်။
ဤရွေ့ကား nootropics နှစ်ခုအလွန်ဆင်တူသက်ရောက်မှုရှိပေလိမ့်မည်။ သို့သော်ထူးခြားသောလက္ခဏာတစ်ခုမှာ coluracetam သည် fasoracetam ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောနှုန်းဖြင့် acetylcholine ကိုထုတ်လုပ်သည်။ ထို့အပြင် fosoracetam ၏စိတ်ကိုတိုးမြှင့်ရာတွင် coluracetam စွမ်းရည်ကိုကောင်းစွာသက်သေပြနိုင်သည်။
အခြား racetams ကဲ့သို့ပင် Fasoracetam သည် Alpha GPC ကဲ့သို့သောကောင်းမွန်သော choline အရင်းအမြစ်နှင့်အတူအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုအခြားဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများဖြင့်စုစည်းရန်ခက်ခဲသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာက coluracetam fasoracetam stack တစ်ခုတည်းသောအကြံပြု stack ဖြစ်ပါတယ်။
(၃) Coluracetam vs. Pramiracetam
Pramiracetam သည် racetam မိသားစုမှအစွမ်းထက်သော nootropics တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်မှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ များသောအားဖြင့်ကျန်းမာသောဘာသာရပ်များတွင်အသုံးမပြုသောအခြား racetams များနှင့်မတူဘဲ pramiracetam ကိုကျန်းမာသန်စွမ်းသူများအတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
coluracetam ကဲ့သို့ပင် pramiracetam သည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိ neurotransmitter ကိုတိုးပွားစေသည်။ သို့သော် coluracetam (သို့မဟုတ်) သတ်သတ်မှတ်မှတ်အာရုံခံဆဲလ်ကိုသက်ရောက်စေသောအခြား racetams များနှင့်မတူဘဲ pramiracetam သည် ၄ ​​င်းတို့အားလုံးကိုသက်ရောက်စေသကဲ့သို့ hippocampus ကိုပါလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။
သူတို့နှစ် ဦး စလုံးမှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးတက်စေနိုင်သော်လည်း pramiracetam သည်လှုံ့ဆော်သူဖြစ်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းရရှိသည်။ သို့သော် coluracetam သည် pramiracetam မှနောက်ထပ်စိတ် ၀ င်စားမှုကိုသက်သာစေပြီးစိတ်ကိုတိုးစေ၏။
(၄) ။ Piracetam vs. Coluracetam
Piracetam သည်ပထမဆုံးသော nootropic ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် racetam အတန်းရှိအခြား nootropics တို့တွင်အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်သည်။ Piracetam သည်သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်သိပ္ပံနည်းကျချို့တဲ့သူများအတွက်ထိရောက်သောသိမြင်မှုတိုးမြှင့်ပေးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျန်းမာသန်စွမ်းသူများအတွက်အထောက်အကူမပြုနိုင်ပါ။
piracetam နှင့် coluracetam နှစ် ဦး စလုံး ဦး နှောက်ထဲမှာ acetylcholine ၏အဆင့်တိုးမြှင့်နေစဉ်၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်မှု mode ကိုကွဲပြားခြားနားသည်။ Piracetam က acetylcholine receptors တွေကို acetylcholine ကိုပိုမိုထိရောက်စေပြီး coluracetam သည် chinine ပြောင်းလဲမှုကို acetylcholine အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခြင်းအားဖြင့်မြင့်မားတဲ့ affinin choline စုပ်ယူမှုဖြစ်စဉ်ကိုလွှမ်းမိုးထားပါတယ်။
Coluracetam သောက်သုံးသော, Stack, ဖြည့်စွက်
(1) Coluracetam သောက်သုံးသော
အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးစီမံခန့်ခွဲမှု (FDA) သည် coluracetam နှင့်အခြား racetam nootropics များကိုအတည်ပြုမထားသောဆေးများအဖြစ်မှတ်ယူထားသဖြင့်စံသတ်မှတ်ထားသော coluracetam သောက်သုံးသောအမျိုးအစားကိုသတ်မှတ်မထားပါ။ ဤကိစ္စတွင်အတွက်အကြံပြုခဲ့သည် coluracetam သောက်သုံးသော လူ့လက်တွေ့လေ့လာမှုများမှဆင်းသက်လာနိုင်သော်လည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာသာလူ့ဘာသာရပ်များနှင့်သုတေသနပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ကောင်းပြီ၊ အသုံးပြုသူတစ် ဦး ချင်းစီမှ coluracetam ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်သင့်လျော်သော coluracetam သောက်သုံးသောဆေးကိုကူညီပေးသောကြောင့်အားလုံးဆုံးရှုံးသွားခြင်းမရှိပါ။ ထိရောက်သောသောက်သုံးသောတစ်နေ့လျှင် ၅-၂၀ မီလီဂရမ်အကြားတည်ရှိသည်။ သို့သော် coluracetam ပါးစပ်နှင့်သူတော်စင်အုပ်ချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ဆေးပမာဏနှင့်အညီချိန်ညှိနိုင်သည်။
coluracetam ပါးစပ်နှင့်သူတော်စင်ဘာသာစကားဖြင့်သုံးသောသောက်သုံးသောရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်သည့်အခါ၊ ဘာသာစကားအရအုပ်ချုပ်မှုတွင်အခြေခံအားဖြင့် coluracetam ကိုလျှာအောက်တွင်ထားခြင်းနှင့်၎င်းကိုအရေပြားမှတစ်ဆင့်ပျော်ဝင်စေခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် coluracetam သက်ရောက်မှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့် coluracetam nootropic ကိုသွေးစီးဆင်းမှုသို့တိုက်ရိုက်စီးဆင်းစေသည်။
သုံးစွဲသူများစွာသည် coluracetam ပမာဏကိုနေ့စဉ် ၂၀-၈၀ မီလီဂရမ်ဖြင့်နှစ်ကြိမ်သောက်သုံးသည်။ တစ်နာရီကိုမနက်စောစောနှင့်နောက်တစ်နေ့သည်မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ဖြစ်သည်။
သို့သော်အဓိကကျသောစိတ်ကျဝေဒနာနှင့်အထွေထွေစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါများကိုကုသရန်သုံးကြိမ်မီလီဂရမ်ခန့်နေ့စဉ်သုံးကြိမ်သောက်သည့်မြင့်မားသော coluracetam သောက်သုံးမှုလိုအပ်သည်။ နေ့စဉ်သုံးကြိမ်သောက်ဆေး ၂၄၀ မီလီဂရမ်အထိသောက်သုံးရန်မလိုဘဲဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲစမ်းသပ်အသုံးပြုခဲ့သည်။
မည်သည့်မူးယစ်ဆေးနှင့်မဆိုအစားအသောက်ဖြည့်စွက်ဆေးများနည်းတူကိုယ်ခန္ဓာလိုအပ်သည့်အတိုင်းတဖြည်းဖြည်းတိုး။ ထိရောက်စွာထိုးပါ။ Coluracetam သည်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည့်ကိုလက်စ်ချို့တဲ့မှုများကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်ကောင်းမွန်သောကိုလိုရာရင်းမြစ်ဖြင့်သောက်သုံးသင့်သည်။
Racetams နှင့်အခြား nootropic ဖြည့်စွက်ဆေးများသည်အခြားဖြည့်စွက်ဆေးများနှင့်တွဲဖက်သောအခါပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များထွက်ပေါ်စေသည်။ ဦး နှောက်အတွင်းခေါင်းကိုက်ခြင်းကဲ့သို့သောမလုံလောက်သော choline နှင့်သက်ဆိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုရှောင်ရှားရန် Racetams သည်ကောင်းမွန်သော choline အရင်းအမြစ်နှင့်အတူအထူးသဖြင့်လိုအပ်သည်။ Coluracetam ခြွင်းချက်မဟုတ်ပါဘူး။
အကယ်၍ coluracetam alpha GPC nootropic stack ကိုသင်စဉ်းစားပါကနေ့စဉ် ၃၀၀ မှ ၆၀၀ မီလီဂရမ်သောက်သောဆေးသည်သင့်လျော်ပါလိမ့်မည်။ မဟုတ်ပါကတစ်နေ့လျှင်စီဒီပီဓာတ်ဖြူ၏ ၂၅၀ မှ ၇၅၀ မီလီဂရမ်ကိုနေ့စဉ် ၁၀-၂၀ မီလီဂရမ်နှင့်အတူယူပါကပိုကောင်းသောရလဒ်များထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်။
Coluracetam, phenylpiracetam, tianeptine, noopept, modafinil, pramiracetam, piracetam နှင့်အပါအဝင်များစွာသောဖြည့်စွက်နှင့်အတူကောင်းစွာ stack ။ oxiracetam အခြားအကြား nootropics.
coluracetam သည်စမ်းသပ်ရန်နေရာပေးသောကြောင့် stacking သည်အလွန်ကျယ်ပြန့်နိုင်သဖြင့်ကြီးမားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင်ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ကိုလက်စ်ချို့တဲ့မှုကိုတန်ပြန်ရန်သင်၏သိမြင်မှုလုပ်ငန်းကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်ပေးမည့်အစုကိုစဉ်းစားပါ။ ထိုကဲ့သို့သော stack အဖြစ် coluracetam oxiracetam stack, coluracetam ပါဝင်သည် fasoracetam အခြားသူများအကြား stack ။
ပြည့်စုံသော coluracetam oxiracetam stack ၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်
20 မီလီဂရမ် coluracetam -the မူလတန်းသိမြင်မှုတိုးမြှင့်
200 မီလီဂရမ် oxiracetam coluracetam နှင့်အတူ Synergetic အကျိုးကျေးဇူးများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်
200 mg caffeine- လှုံ့ဆော်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်
400 မီလီဂရမ် L-Theanine - အပန်းဖြေမှုကိုမြှင့်တင်ရန်
Alpha GPC ဖြည့်စွက်ဆေးကဲ့သို့သောဓာတ်ရင်းမြစ် ၃၀၀ မီလီဂရမ်
(3) Coluracetam ဖြည့်စွက်
Coluracetam ဖြည့်စွက်ချက်ကိုအင်း၏ပုံစံကိုတွေ့နိုင်သည် coluracetam အမှုန့်, အရည်များသောအားဖြင့်အလွယ်တကူ coluracetam တောင့အဖြစ် sublingually နှင့်လည်းယူ။
coluracetam ကိုမည်သို့ရရှိနိုင်ကြောင်းအဓိကနည်းလမ်းများဖြစ်သည် sublingual vs ပါးစပ် coluracetam အုပ်ချုပ်ရေး။ ဘာသာစကားနှစ်ခုပါသောအုပ်ချုပ်မှုသည်ပါးစပ်ထက်ပိုမိုထိရောက်သည်။ ဖြည့်စွက်စာကိုလျှာအောက်တွင်ထားသောအခါသွေးစီးဆင်းမှုသို့တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်ပြီးပိုမိုမြန်ဆန်စွာစုပ်ယူနိုင်သည်။
Coluracetam သည်၎င်း၏အဓိကလုပ်ဆောင်မှုအတွက်လူကြိုက်များသည်မှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ အမြင်အာရုံတိုးတက်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ကျရောဂါအကြီးအကျယ်သက်သာစေခြင်းအပြင်အူသိမ်အူမရောဂါလက္ခဏာများကိုကုသခြင်းကဲ့သို့သောအခြားအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အတူလေ့လာခြင်း။
Coluracetam သည်အဓိကအားဖြင့် ဦး နှောက်တွင်းရှိ acetylcholine ပမာဏတိုးပွားစေသည်။ coluracetam ဖြည့်စွက်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာဥ၊ အသည်း၊ အမဲသားနှင့်ကြက်သားအသားများ၊
coluracetam ကိုသုံးစွဲသူများစွာသည် coluracetam ၏သက်ရောက်မှုများနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက် CDP-Choline သို့မဟုတ် Alpha-GPC တို့ကဲ့သို့သောကောင်းမွန်သော choline အရင်းအမြစ်နှင့်အတူ၎င်းကို stack လုပ်သည်။
Coluracetam သည်အဆီတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သည့် nootropic တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤသည်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောစုပ်ယူမှုအတွက်ပရိုတိန်းမပါသောအုန်းဆီ (သို့) အပိုအပျိုကညာသံလွင်ဆီကဲ့သို့ကျန်းမာသောဆီနှင့်ခေါ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။
Coluracetam သည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမဖြစ်စေဘဲအသုံးပြုပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောခံနိုင်ရည်ရှိသော nootropic ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အချို့သောပျော့ပျောင်းသောအလယ်အလတ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ အလွန်အကျွံသောက်သည့်အခါ coluracetam အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်များသောအားဖြင့်ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။
ဤရွေ့ကားဖြစ်နိုင်သော coluracetam ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပါဝင်သည်;
ခေါင်းကိုက်ခြင်း - choline ပြောင်းလဲမှုကို acetylcholine အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် racetams အားလုံးမှာအလွန်အသုံးများပါတယ်။ ဦး နှောက်အတွင်းမလုံလောက်သောကိုလိုရင်းသည်များသောအားဖြင့် ဦး နှောက်အစိတ်အပိုင်းများတွင်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အချို့သော coluracetam သုံးစွဲသူများသည်ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖြစ်ပွားခဲ့သည် ၎င်းကိုကောင်းမွန်သောဓာတ်ရင်းမြစ်များဖြင့်သိုလှောင်ထားခြင်းနှင့်သောက်သုံးသောပမာဏကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်၎င်းကိုတည့်မတ်ပေးသည်။
ဦး နှောက်မြူ: ဒီရိုးရှင်းစွာအာရုံနှင့်ရှုပ်ထွေးမရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ coluracetam ကိုအသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုမရှိခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကင်းမဲ့ခြင်းတို့၏ခံစားချက်ကိုတင်ပြခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ပုံမှန်အားဖြင့်မှန်ကန်သောသောက်သုံးသောအချိန်၌ coluracetam ကိုပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပျောက်ကွယ်သွားသည်။
စိတ်ဓါတ်ကျဆင်းမှု - ဒါကဖြည့်စွက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုဆန့်ကျင်သည်။ ၎င်းကိုစိတ်ခံစားမှုမြှင့်တင်ပေးသူဟုလူသိများသော်လည်းအချို့သော coluracetam သုံးစွဲသူများသည်အစတွင်စိတ်ဓာတ်ကျမှုနည်းပါးပြီးများသောအားဖြင့်ပိုမိုများပြားသည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ဆေးထိုးခြင်းကိုလျှော့ချခြင်းကပိုမိုကောင်းမွန်သောခံစားချက်ကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်တစ်လျှောက်စိတ်ခံစားချက်တိုးတက်စေရန်နှင့်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
ပျို့ခြင်း - coluracetam အလွန်အကျွံသောက်သုံးမိသောအခါသူသည်အသည်းနှင့်တွေ့ရလေ့ရှိသည်။
နေ့ခင်းဘက်တွင်အိပ်ချင်ခြင်း - အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်းသည်တစ်နေ့တာအတွင်း၌ပင်သင်၏နိုးကြားမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။
အခြား coluracetam ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှာစိတ်တိုလွယ်ခြင်း၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊
သတင်းကောင်းသည်ဤ coluracetam သက်ရောက်မှုများအားဖြင့်ရှောင်ရှားနိုင်သည်၊
နံနက်ခင်းနှင့်မွန်းလွဲပိုင်းများတွင်ဖြည့်စွက်ချက်ယူခြင်း၊ \_ t
Coluracetam interaction က
အချို့သော coluracetam interaction က အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ပြီးဒီတစ်ခုကဒီဖြည့်စွက်စာကိုစဉ်းစားတဲ့အခါအရမ်းသတိထားသင့်တယ်။ သင့်ဆရာ ၀ န်နှင့်စကားပြောခြင်းသည်မည်သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်သောမည်သည့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်သင်၏အစားအသောက်ဖြည့်စွက်မှုရွေးချယ်မှုများတွင်သင့်အားအကြောင်းကြားရန်သင့်အားအထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
Coluracetam သည် Parkinson ၏ဆေးဝါးများ၊ Benadryl နှင့်အချို့သော antipsychotics ဆေးများအပါအဝင် anticholinergic ဆေးများ၏ထိရောက်မှုကိုဟန့်တားလိမ့်မည်။
Coluracetam သည် cholinergic ဖြည့်စွက်မှုတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် Alzheimer နှင့် glaucoma ကဲ့သို့သော cholinergic ဆေးများ၏သက်ရောက်မှုများကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်။
၎င်းသည်ချောင်းဆိုးဆေးနှင့်မေ့ဆေးကဲ့သို့သော NMDA receptor မူးယစ်ဆေးများကိုလည်းလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။
လက်တွေ့သုတေသန & အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ
Coluracetam နှင့်ပတ်သက်သည့်လူ့လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများကို Brain Cells Inc မှပြုလုပ်သောစမ်းသပ်မှုတစ်ခုတွင်အဓိကစိတ်ကျဝေဒနာနှင့်အထွေထွေစိုးရိမ်ပူပန်မှုများကိုခံစားနေရသောလူ ၁၀၀ ကျော်အားလေ့လာမှုတစ်ခုကန့်သတ်ထားသည်။ ပဏာမရလဒ်များအရ coluracetam တွင်အလားအလာအချို့ရှိသော်လည်း၎င်းတို့သည်ဖြည့်စွက်တီထွင်မှုကိုမပြုလုပ်ခဲ့ပါ။
coluracetam သည်လူနည်းနည်းလေ့လာမှုပြုထားသော nootropic ဒြပ်ပေါင်းတစ်မျိုးဖြစ်သော်လည်းသုံးစွဲသူတစ် ဦး ချင်းသည်အချို့သောအကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုသတင်းပို့သည်။ အစီရင်ခံ coluracetam အတွေ့အကြုံများအချို့ပါ၏
သို့သော်အချို့ coluracetam ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့ကိုဖော်ပြပါ -
အထက်ပါ coluracetam သက်ရောက်မှုများသိပ္ပံနည်းကျကျောထောက်နောက်ခံမရှိခြင်းကြောင့်ဖြည့်စွက်ဆေးများမသောက်မီသင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
အဘယ်သူသည် coluracetam ကိုသုံးနိုင်သည်?
Coluracetam အမှုန့်သို့မဟုတ်ဖြေရှင်းချက်သည်၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရိတ်သိမ်းလိုသူအားလုံးအတွက်ကောင်းသည်။ သို့သော်ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများကဲ့သို့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြsomeနာများရှိသည့်လူများအားဤဖြည့်စွက်ဆေးကိုမသုံးရန်အကြံပေးသည်။
ထိုကဲ့သို့သောအသက်အရွယ်နှင့် Schizophrenia ကဲ့သို့သောရောဂါများနှင့်အခြားမှတ်ဉာဏ် - ချို့တဲ့စေသောအကြောင်းရင်းများတွင်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကဲ့သို့သောအကြောင်းပြချက်များကြောင့်မှတ်ဉာဏ်ချို့တဲ့ခြင်းခံစားနေရသောလူများသည် coluracetam ဖြည့်စွက်ခြင်းမှအကျိုးရနိုင်သည်။
Coluracetam အမှုန့်သည်စိတ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာခံစားနေရသောလူများအတွက်စိတ်ခံစားမှုနှင့်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သောကြောင့်သင့်လျော်သည်။ ၎င်း coluracetam သည် ဦး နှောက်အတွင်းရှိ acetylcholine ကိုတိုးပွားစေသည်။ ၎င်းသည်မှတ်ဥာဏ်နှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုအတွက် Coluracetam အကောင်းတစ် ဦး option ကိုဖြစ်ပါတယ်။
Coluracetam သည်အမြင်အာရုံတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်သူများအတွက်ကောင်းမွန်သောဖြည့်စွက်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဖြည့်စွက်မှုသည်အမြင်အာရုံကိုမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ ကြည်လင်ပြတ်သားသောဆန့်ကျင်ဘက်နှင့်အလင်းရောင်ပိုမိုတောက်ပလာအောင်ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ရန်ကူညီပေးသည်။ ၎င်းသည်ပျက်စီးသည့်လွှာနှင့် optical အာရုံကြောများပြုပြင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Coluracetam အမှုန့်သို့မဟုတ် ၄ င်း၏အရည်ပုံစံသည်ကျောင်းသားများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြည့်စွက်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်နားလည်မှုနှင့်တိုးမြှင့်ခေါ်ဆိုမှုကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
ရောင်းရန် Coluracetam အွန်လိုင်းအလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါသည်။ Coluracetam ကိုသင်ရောင်းရန်သို့မဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုရန်ဝယ်ယူရန်စဉ်းစားပါကအွန်လိုင်းပေါ်ရှိနာမည်ကြီးရောင်းချသူများကိုသေချာစစ်ဆေးပါ။ ဤသည်မှာဖြည့်စွက်ချက်အသစ်ဖြစ်သောကြောင့်များစွာသောကုမ္ပဏီများသည် coluracetam ကိုရောင်းချရန်ကမ်းလှမ်းခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်သည့်အခြားနည်းလမ်းများမှအလွယ်တကူရွေးချယ်နိုင်သည်။
Coluracetam သည် racetam မိသားစု ၀ င်သစ်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီးသိမြင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသည့်အပြင်အမြင်အာရုံကိုလည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်စေခြင်းကြောင့်လူကြိုက်များခဲ့သည်။
လုပ်ဆောင်ချက်၏အဓိက coluracetam ယန္တရားမြင့် affinity ကိုလိုရင်းလွှာမှ (HACU) လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှတဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ phenylpiracetam တွင်အလားတူယန္တရားတစ်ခုတည်းရှိသောကြောင့်၎င်းသည်အခြား racetam များကြားထူးခြားပြီးထူးခြားစေသည်။
ဒီကိစ္စမှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အလောင်းတွေဟာ Coluracetam ကိုသဘာဝကျကျမထုတ်လုပ်နိုင်တာပါ။ ထို့ကြောင့် coluracetam အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားရရန်လိုအပ်ပါကဖြည့်စွက်ဆေးများမှရရှိသည်။
အကျိုးကျေးဇူးများနှင့် ပတ်သက်၍ လူ့စမ်းသပ်မှုများကိုကန့်သတ်ချက်များသာမှတ်တမ်းတင်ထားသော်လည်းလူအများအပြားက၎င်းကိုကြိုးစားပြီးအကျိုးကျေးဇူးအချို့ကိုတင်ပြခဲ့သည်။
စိတ်ကျရောဂါအဘို့အ Coluracetam နှင့်စိုးရိမ်စိတ်တစ်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင်အစီရင်ခံထားသည်နှင့်ဤကဆိုပါတယ်အကျိုးကျေးဇူးများကိုအတည်ပြုနောက်ထပ်လေ့လာမှုများအဘို့အကောင်းတစ် ဦး ကိုယ်စားလှယ်လောင်းစေသည်။
ဤဖြည့်စွက်မှုနှင့်အတူလူ့လေ့လာမှုများအကန့်အသတ်ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကိုရှင်းလင်းစွာမသတ်မှတ်ထားပါ၊ သို့သော်ခေါင်းကိုက်ခြင်းသည် racetams နှင့်ပြcommonနာတစ်ခုဖြစ်သည်။
coluracetam ကို choline အရင်းအမြစ်နှင့်အတူ stacking ထိုကဲ့သို့သောခေါင်းကိုက်ခြင်းကဲ့သို့ choline လိုငွေပြမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောသက်ရောက်မှုကိုထေမိဖို့အကြံပြုသည်။ ထိုသို့သော stack ပါဝင်သည် coluracetam alpha GPC CDC ကိုလိုနီ stack stack နှင့် coluracetam ။
Coluracetam သည်အဆီပျော်ဝင်နိုင်သောဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဆဲလ်များထဲသို့လွယ်ကူစွာစုပ်ယူနိုင်ရန်အတွက်၎င်းသည်အဆီသို့မဟုတ်အပိုအပျိုကညာသံလွင်ဆီကဲ့သို့သောကျန်းမာသောအဆီ / ဆီနှင့်ခေါ်သင့်သည်။
Coluracetam သည်အခြား racetam များနှင့်လည်းကောင်းမွန်သည် အခြားဖြည့်စွက်။ ထိုကဲ့သို့သော coluracetam stack ၏ဥပမာ coluracetam oxiracetam stack နှင့် coluracetam fasoracetam stack ဖြစ်ကြသည်။ ဤသည် coluracetam နှင့်အခြားထုတ်ကုန်အတွက်နောက်ထပ်သုတေသနအဘို့အခွင့်အလမ်းပေး။ noopept နှင့်အတူ Coluracetam မှတ်ဥာဏ်နှင့်သိမြင်မှု function ကိုတိုးမြှင့်များအတွက်ဖြစ်နိုင်သောညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ထို့အပြင် coluracetam သည်အခြား racetam များကဲ့သို့ပင် acetylcholine ပမာဏကိုတိုးပွားစေပြီး choline ကျဆင်းသွားသည်။ ၎င်းသည် coluracetam alpha GPC stack ကဲ့သို့ကောင်းသော choline အရင်းအမြစ်နှင့်အတူ coluracetam stack စေသည်။
Coluracetam ၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုအတည်ပြုရန်အတွက်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသောစမ်းသပ်မှုများကများစွာသောပုဂ္ဂိုလ်ရေး coluracetam အတွေ့အကြုံများသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုဖော်ပြသည်။ ဒီအကျိုးကျေးဇူးများကိုအတည်ပြုရန်နောက်ထပ်သုတေသနလိုအပ်သည်ကိုပြသသည်။
BrainCells Inc. သည်ပိတ်လိုက်သည်။ coluracetam သည်နောက်ထပ်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများအတွက်လိုင်စင်အတွက်ဖြစ်သည်။
Akaike A, et al ။ (1998) ။ ယဉ်ကျေးသော cortical အာရုံခံဆဲလ်များ၌အချိုမှု cytotoxicity အပေါ်, MKC-231 တစ် ဦး ဝတ္ထုမြင့်မားသောဆှဖှေဲ့ကိုလိုနီလွှာမှတိုးမြှင့်၏အကာအကွယ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Jpn J ကို Pharmacol.
Bessho, T. , Takashina, K. , Tabata, R. , Ohshima, C, Chaki, H. , Yamabe, H. , Egawa, M. , Tobe, A. , & Saito, K. (1996) ။ ဝတ္ထု၏မြင့်မားသောဆှဖှေဲ့အမြှေးပါးကိုလက်စုပ်ယူမှုတိုးမြှင့်ခြင်းကို 2- (2-oxopyrrolidin-1-yl) -N- (2,3-dimethyl-5,6,7,8-tetrahydrofuro [2,3-b] quinolin-4- ကြွက်များတွင်ရေဝင်္သင်ယူမှု၏လိုငွေပြမှုအပေါ် yl) acetoamide ။ Arzneimittel-Forschung, 46(4), 369-373 ။
Murai, အက်စ်, Saito, အိပ်ချ်, Abe, အီး, Masuda, Y. , Odashima, ဂျေ, & Itoh, တီ (1994) ။ MKC-231 သည်ကာလ ၀ င်ဓာတ်ငွေ့တိုးမြှင့်ခြင်းကိုတိုးမြှင့်ပေးသည့်အတွက်မှတ်ဥာဏ်ချို့တဲ့ခြင်းနှင့်ကြွက်များတွင် ethylcholine aziridinium အိုင်းယွန်းခြင်းကြောင့် hippocampal acetylcholine ကိုလျော့နည်းစေသည်။ အာရုံကြောဂီယာ၏ဂျာနယ်, 98 (1), 1-13 ။Doi: 10.1007 / bf01277590 ။
Shirayama, Y. , Yamamoto, အေ, Nishimura, T. , Katayama, အက်စ်, & Kawahara, R. (2007) ။ MGC-231 သည်ကိုလင်းဓာတ်မြှင့်တင်ရေးကိုထိတွေ့မှုသည် phencyclidine-induced အမူအကျင့်ဆိုင်ရာလိုငွေပြမှုများနှင့်ကြွက်များတွင်မိလ္လာကန် cholinergic အာရုံခံဆဲလ်များလျော့ချခြင်းကိုဆန့်ကျင်သည်။ ဥရောပ Neuropsychopharmacology, 17 (9), 616-626 ။ https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2007.02.011 ။
BrainCells Inc သည် Wayback Machine တွင် BCI-2Archived နိုဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၁ စမ်းသပ်မှုအဆင့် ၂ ကစမ်းသပ်မှုမှရလဒ်များကိုကြေငြာခဲ့သည်။
RAW COLURACETAM ဖုန်မှုန့် (135463-81-9)
လုပ်ဆောင်ချက်၏ 3.Coluracetam ယန္တရား
4. Coluracetam ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
5.Coluracetam Vs aniracetam, fasoracetam, pramiracetam နှင့် Piracetam ။ ခြားနားချက်ကဘာလဲ
6.Coluracetam သောက်သုံးသော, Stack, ဖြည့်စွက်
8.Clinical သုတေသန & အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံ
၉။ မည်သူသည် coluracetam ကိုသုံးနိုင်သည်။
၁၀။ Coluracetam ကိုဘယ်မှာဝယ်ရမလဲ။